Hadalhayn xoogan oo ka dhalatay ciriiriga Suuqa Bakaaraha | Universal Somali TV
Hadalhayn xoogan oo ka dhalatay ciriiriga Suuqa Bakaaraha
"Sida ay dadka ugu isku dhex qaadayaan haddaad fiiriso, waxaadba is leedahay dadkaan Coronavirus lamaba jooggo, hadana Muqdisho waa meesha kiisaska ugu badan laga helay, dalka oo dhan." Ayuu yiri ganacsadaha.
Waxa kaloo uu yiri "Tobanka dambe bisha Ramadan marka lagu jiro, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya aad iyo aad ayaa suuqa looga dukaameystaa, dadka qaar waxay ka yimaadaan gobolada ku dhow dhow magaalada."
Cabdi Cali ayaa intaa raaciyay "Markasta dadka waan u sheegnaa inay kala fogaadaan, laakiin dadka diyaar uma ahan inay ku maqlaan, hawlahooda bayna ku mashquulsan yihiin."
Haldoorka bulshada ayaa kuu sheegaya inaanay macno badan sameynayn bandowga xilliga habeenkii ka jira Caasimadda Muqdisho, haddii dadka isu buuranayan suuqyada, xilli xanuunkan uu yahay kan ugu nugul ee la'is qaadsiiyo.
Kan-xigaDowladda Somaliya oo ku dhawaaqday in...
Kan-horeJubbaland oo si xoogan uga hortimid m...
55,228,852 unique visits